Taariikhda My Butros » Sidee Sex Caawin Kara nolol tan dhaanta ka
Sidee Sex Caawin Kara nolol tan dhaanta ka
Last updated: Jan. 24 2020 | 2 min akhri
Dhamaanteen waan ognahay sida kaliya wanaagsan galmada dareemi karaa laakiin ma ogtahay in galmo waa dhab caafimaad qaba oo aad u?
Sex caawinaysaa in habka difaaca aad si haboon u shaqaynayn. Dadka galmo joogto ah dhab ahaantii leeyihiin heerar sare oo ah antibodies in jirkaaga difaaco jeermiska, fayrusyada, iyo walax kale. Dabcan, waxaa sidoo kale ku talineynaa in aad sii joogto firfircoon, cunto caafimaad leh, oo aad hesho hurdo ku filan si loo hubiyo in nidaamka difaaca faraxsan.
Sex Sarre libido. Galmo isagoo aan ka dhigi doono oo kaliya waxaa wanaagsan laakiin wuxuu wanaajin doonaa libido. Dumarka, galmo kordhiyaa sifaynta siilka, Socodka dhiigga, iyo barti, dhammaan galmo samaynta dareento in aad fiican halka abuuraya degto a ka awood badan.
Sex hoos u cadaadiska dhiigga. Waxaa jira cilmi in jeedisay in uu jiro xiriir u dhexeeya jinsiga iyo dhiig-karka,. Sex sidoo kale waxay hoos u dhigtaa khatarta wadno. Laga soo tago in hab aad u wanaagsan in ay sii heerka garaaca wadnahaaga up, galmo sidoo kale kaa caawinaysaa in heerarka estrogen iyo testosterone dheeli.
Sex ku tiriyaa sida jimicsi. Inkasta oo ay u ma beddeli doonaa tababarka wadnaha caadiga ah, waxa ay hubaal ka caawisaa. Sida caadiga ah, galmo gubtay ku saabsan shan kaloori daqiiqadii marka laga soo tago dhufatid ilaa heerka garaaca wadnahaaga iyo isticmaalka murqaha kala duwan.
Sex yareyn karta xanuunka. Haddii aad la dagaalamaya madax xanuunka ama xanuun iyo kaar, halkii ay ka dilis aspirin, isku day lagu naafeeyo ah. Intii lagu naafeeyo ah, hormone la sii daayay taas oo ka caawisa aad kor ugu qaaddo dulqaad xanuun. Xitaa kicinta aan lagu naafeeyo ah ayaa kaa caawin kara loo yareeyo xanuunka.
Hoos u dhigi karta fursado nin ee kansarka qanjirka 'prostate' Sex. Daraasad dhawaan samaysay ay Journal of Medical Association American wuxuu dhigayaa in ragga kuwaas oo badanaa shahwo (ugu yaraan 21 goor bishii) waa yar tahay si aad u hesho kansarka qanjirka 'prostate.
Sex hagaajinaysaa hurdo. Dadka si ay u hurudo si deg deg ah ka dib markii galmo u muuqdaan, gaar ahaan ay tahay waxa jira naafeeyo ah ku lug. Ka dib markii lagu naafeeyo ah, prolactin hormone la sii daayay taasoo sahla ee dareenka hurdo iyo nasashada.
Ugu dambayn, galmo waxay ka caawisaa in uu yareeyo walbahaarka. Ahaanshaha dhow, jidh ahaan iyo niyad ahaan, in lamaanahaaga dejiyo karo, saxariir, iyo walaaca hoose. Isgacan Taabashadu iyo sii daayo karaa dabiiciga ah “hormone dareemaan-wanaag” halka kacsiga amps ilaa habka ahaanshaha iyo abaal isagoo sii daayo kiimikada maskaxda. Sex iyo isku dhawaanshaha jireed iyo maskaxeed sidoo kale kordhin kartaa isku-kalsooni iyo farxad.
Sida aad arki karto, jinsi oo keliya ma keeni doontaa in nolol farxad laakiin qof caafimaad qaba oo aad u.
Waxaad dhahdaa No Si Taariikhaha First kulul
Iska ilaali Liars